ch 16 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 16 မဿဲ
16:2 But he responded by saying to them: “When evening arrives, သငျသညျပွောဆို, ‘It will be calm, for the sky is red,''
16:4 An evil and adulterous generation seeksasign. Andasign shall not be given to it, except the sign of the prophet Jonah.” And leaving them behind, သူသညျသှား.
16:6 ထိုသူတို့အားဆို၏, “Consider and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees.”
16:7 But they were thinking within themselves, ဟုဆို, “It is because we have not brought bread.”
16:8 ထိုအခါယေရှုသည်, ဒီ သိ., ကပြောပါတယ်: “Why do you consider within yourselves, O little in faith, that it is because you have no bread?
16:13 ထိုအခါယေရှုသည်ကဲသရိဖိလိပ္ပုစိတျအပိုငျးသို့သွားလေ၏. မိမိတပည့်မေးခွန်းထုတ်, ဟုဆို, "လူယောက်ျား၏သားတော်ဖြစ်သည်ကိုအဘယ်သူသည်ဆိုကြ?"
16:14 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "တချို့နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ဆိုရ, နှင့်အခြားသူများဧလိယကပြောပါ, နေဆဲအခြားသူတွေကယေရမိ မှစ. ပရောတစ်ဦးကဆိုသည်။ "
16:15 ယေရှုက, "ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့အဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြ?"
16:16 ရှိမုန်ပေတရုကပြောနေသဖြင့်တုန့်ပြန်, "ကိုယ်တော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း, အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်။ "
16:17 နှင့်တုန့်ပြန်, ယရှေုကလညျး: "မင်္ဂလာရှိသင်, ယောနရှိမုန်သား. အသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင့်အားထင်ရှားမမူ, ဒါပေမယ့်ငါ့ခမည်းတော်, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်.
16:18 ထိုအခါငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်, သင်သည်ပေတရုဖြစ်ကြောင်း, ဤကျောက်ပေါ်မှာငါ့ဘုရားကျောင်းတည်ဆောက်ကြမည်, နှင့်ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ၏တံခါးတို့သည်မနိုင်ရာ.
16:19 သင်တို့ကိုငါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့၏သော့ကိုငါပေးမည်. သမျှကိုသင်မွကွေီးပျေါမှာခညျြနှောငျရကြလိမ့်မည်ခညျြနှောငျခံရကြလိမ့်မည်, ပင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ. သမျှကိုသင်မွကွေီးပျေါမှာတောင်းဘဲလွှတ်ရမည်ဖြန့်ချိရကြလိမ့်မည်, ပင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ။ "
16:21 ထိုအခြိနျ မှစ., ယရှေုသညျယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားဘို့လိုအပ်ခဲ့ကြောင်းပည့်တော်တို့မှထုတ်ဖေါ်ဖို့စတင်, နှင့်အသက်ကြီးသူတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်အများကြီးခံရရန်, အသေသတ်ခံရဖို့, နှင့်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်ရန်.
16:22 ထိုအခါပေတရု, သူ့ကိုဘေးဖယ်ယူပြီး, သူ့ကိုဆုံးမလော့စတင်, ဟုဆို, "သခင်, ဒါကြောင့်သင့်ထံမှဝေးဖြစ်နိုင်သည်; ဤသူသည်သင်တို့မှဖြစ်ပျက်မရကြလိမ့်မည်။ "
16:23 ထိုအရှားလှည့်, ယေရှုသည်ပေတရုအားမိန့်: "ငါ့နောက်သို့ Get, ရာသူ့ကိုစာတန်; သငျသညျအကြှနျုပျကိုရန်အတားအဆီးများမှာ. သငျသညျဘုရားသခငျ၏အဘယျအရသိရသည်ပြုမူကြသည်မဟုတ်များအတွက်, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားသည်အဘယျသို့အရသိရသည်။ "
16:24 ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်သည်မိမိအားမိန့်: "မည်သူမဆိုငါ့နောက်ကြွလာရန်ဆန္ဒရှိသည်ဆိုပါက, သူ့ကိုဖြင့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ကြကုန်အံ့, နှင့်မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူ, ငါ့နောက်သို့လိုက်.
16:25 မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်မယ်လို့သောသူသည်, ရှုံးလိမ့်မည်. သို့သော်အကြင်သူသည်ငါ့မျက်နှာကို ထောက်. သူ၏အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်တွေ့လိမ့်မည်.
16:26 ဘယ်လိုလူတအကျိုးခံစားရပါဘူးများအတွက်, သူတစျလောကလုံးသို့ရောက်တတ်သောလျှင်, သေးအမှန်တကယ်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့နေကြရသည်? သို့မဟုတ်လူသည်မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးရကြလိမ့်မည်?
16:27 လူသားသည်မိမိအဘခမည်းတော်၏ဘုန်းအသရေအတွက်ရောက်လာကြလိမ့်မည်, မိမိအကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူ. ပြီးတော့သူကသူ့အကျင့်အတိုင်းအသီးအသီးပြန်ဆပ်လိမ့်မယ်.
16:28 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အချို့ကဒီမှာရပ်နေသူတွေထဲမှာရှိပါတယ်, အသေခံမြည်းစမ်းရမည်မဟုတ်သူကို, သူတို့နန်းစံအတွက်ရောက်ရှိလာသောလူသားသည်မြင်အထိပါပဲ။ "